विवाहपछि प्रियंकाले गरिन अहिलेसम्मकै ठूलो खुलासा
Home /मनाेरञ्जन/विवाहपछि प्रियंकाले गरिन अहिलेसम्मकै ठूलो खुलासा
अभिनेत्री प्रियंका चोपडाली एकपछि अर्को सफलता हात पार्दै गएकी छन्। प्रियंकाको पहिचान केबल भारतमात्रै नभएर विश्वर उनको नामको चर्चामा छ। हालै प्रियंकाले १०औँ वार्षिक महिला मस्मेलनमा भाग लिएकी थिइन्। त्यसक्रममा प्रियंकाले अहिलेसम्मकै ठूलो खुलासा गरेकी छन्। उनले सम्मेलनका क्रममा आफूमाथि पनि यौन उत्पीडन भएको खुलासा गरेकी हुन्। उनले यस विषयमा कुरा गर्नका लागि आफूलाई कुनै अफ्ठ्यारो नहुने पनि बताइन्।
सम्मलेनमा उनले यसबाहेक विश्वभरका महिलाहरूले सामना गरेका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूका बारेमा कुराकानी गरिन्। यही क्रममा महिला यौन उत्पीडनका बारेमा विषय उठ्यो। प्रियंकाले यस विषयमा खुलेर आफ्नो धारणा राखिन्।
‘महिलाका विषयमा यौन उत्पीडन जोडिएर आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ अब एकआपसमा सबै महिला जोडियौँ भने हामीलाई पीडकले चुप गराउन सक्दैनन्’ यस विषयमा प्रियंकाकाले भनिन्, ‘यस्तो भयो भने अन्य महिलाहरूलाई पनि साहस आउने छ।’
उनले आफू पनि यौन उत्पीडनबाट बच्न नसकेको खुलासा पनि गरिन। ‘यो हलमा बसेको कोही न कोही जीवनमा एक पटक उत्पीडनको सामाना गरेकै छन्’ उनले अगाडि थपिन्, ‘हामीहरूसँग एउटा आवाज थियो। तर कसैले पनि हाम्रो आवाज सुनेन्। अहिले मसँग एउटा कथा छ। यसलाई सुनाउँदा मलाई लाग्छ भने लाग्दैन र यस्तो कथा भोग्ने म एक्लै छु जस्तो पनि लाग्दैन।’
गतवर्ष मिटु मुभमेन्टका माध्यमबाट बलिउडका कैयौँ हस्तिहरूमाथि यौन शोषणको आरोप लगाइएको थियो। यसै क्रममा मिटु अभियानबाट कतिपय हस्तिहरूलाई फिल्म इन्ड्रस्टिबाट बहिस्कार गरिएको थियो। मिटु अभियानका क्रममा नाना पाटेकर, साजिद खान, आलोक नाथ, विकास बहललागयतका सेलिब्रिटीमाथि यौन उत्पीडनको आरोप लागेको थियो।
के दीपिका गर्भवती छिन्?
के तपाईं वर्कआउटको पूरा फाइदा लिन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस यी उपाय
TAGS: प्रियंका चोपडा यौन शिक्षा यौन शोषण